Seddax waxyaabood oo laga bartay kooxdii Liverpool ee ku garab dhacday Southampton - Hablaha Media Network
Seddax waxyaabood oo laga bartay kooxdii Liverpool ee ku garab dhacday Southampton
HMN:- Shabakadda Gool.Net ayaa idiin soo gudbin doonta seddax waxyaabood oo aan ka baranay kooxdii Liverpool ee barbardhaca goolal la’aanta ah la gashay naadiga Southampton ciyaar ka tirsan horyaalka England Premier League oo ka dhacday garoonka Anfield Road.
LIVERPOOL MA AHAN REAL MADRID
Real Madrid ayaa adduunka uga yaabsatay qaab ciyaareedka ay soo bandhigaan xiddigaheeda dooqa labaad (Plan B), iyadoo qeybihii dambe ee xilli ciyaareedkaan ku adkaaneysay xiddigaheeda keydka.
Laakiin kooxda tababare Jurgen Klopp waxaa galabta ka muuqatay in aysan heerkaas oo kale joogin, Southampton ayaa xitaa halis gelisay muujisayna inuu liito qorshaha daafaca ee Reds. Sidaas darteed tababaraha reer Germany wuxuu u baahan yahay inuu dhisto koox diyaarsan oo dooqa koowaad ah iyo koox xoogan oo dooqa labaad ah.
WAA IN REDS AY SU’AALO ISKA WEYDIISAA LUMINTA FURSADAHA
Liverpool ayaa fursado wanaagsan abuurtay kulankaan, kubadda ayey kasoo laadayeen meel shabaqa u dheer. Laakiin ma aysan dumin daaficii Saints. Umana muuqan saacaddii ugu horreysay kulankaan kuwa dillaayaal ah marka ay goolka hortagaan.
Philippe Coutinho ayaa loo diray inuu shaqo kasoo qabto qadka dhexe, halka Lucas uu kubadda kasoo fogeynaayey kooxdiisa waana ninkii ay aheyd inuu kubadda qadka dhexe kasoo dhiso. Sidaas darteed malaha Reds waxay baahan tahay xiddigo xawaare badan oo qadka dhexe ah.
KLOPP WAA KA DAAHAY FALCELINTA
Jurgen Klopp ayaa la weydiin karaa sababta uusan qeybtii labaad bedello dhaqsi ah u sameyn markii uu shaqeyn waayey qorshihiisii koowaad ee uu u diyaariyey kulankaan.
Keyka ayuu uga soo tegay kulankaan Adam Lallana iyo Daniel Sturridge waxayna aheyd inuu ciyaarta soo geliyo daqiiqadii 70aad oo uu keenay labadaan xiddig ee reer England.